">Zimbabwe Visa for Finland citizens 🥇 Online and Fast
zimbabwe Visa for finland citizens
Visa notes : Also eligible for a universal visa allowing access to Zambia.
Visa issuer : Nationals of Finland traveling as tourists can obtain visa on arrival for a maximum stay of 3 months. Nationals of Finland traveling on business can obtain visa on arrival for a maximum stay of 30 days. Nationals of Finland traveling as tourists can obtain a Kaza Visa on arrival at Harare (HRE) and Victoria Falls (VFA). The visa is also valid for entry into Zambia and allows multiple entries between the two countries. The combined stay must not exceed 30 days.
Passport exemptions : Nationals of Finland with a machinereadable emergency passport. Nationals of Finland with a machinereadable temporary passport.
Information about minors : WARNING! In accordance with European Union (EU) Legislation, all minors who are nationals of Finland and depart from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Romania or a Schengen Member State must have their own travel document that meets the entry requirements of their destination.
Harare is the main city of Zimbabwe. Zimbabwe is situated in Africa. Tourists from Finland need visa to visit Zimbabwe. In the Zimbabwe country page you can find more tourist information about infrastructure and attractions.
Top 10 Attractions for Finland citizens travelling to Zimbabwe :
India visa for citizens of AustraliaBahrain visa for citizens of TurkeyKenya visa for citizens of JapanKuwait visa for citizens of AustraliaPortugal visa for citizens of EgyptChina visa for citizens of CambodiaSwitzerland visa for citizens of OmanAzerbaijan visa for citizens of FranceIndia visa for citizens of Vietnam